Arindrao ny kalandrie misy loko mba hahamora kokoa ny andro | Avy amin'ny mac aho
Arindrao ny kalandrie misy loko mba hahamora ny andavan'andro anao
Ao amin'ny kalandrie iCloud, ary koa ny maro hafa, azo atao ny miasa miaraka amin'ny kalandrie maro miaraka. Raha be ny fandaharam-potoanao, dia azo antoka fa hanana kalandrie manokana ianao sy ny asa hafa ary toy ny fialamboly na fanatanjahantena. Lavitra, iCloud kalandrie manampy iray amin'ny toerana misy anao antsoina hoe Family ary mamela anao hizara ity kalandrie ity amin'ireo mpikambana ao amin'ny kaontinao iCloud.
Raha mila manana kalandrie mihoatra ny roa na telo ianao, ny fomba tokana mandrindra dia ny fanomezana loko isan-karazany amin'izy ireo, ohatra: manga ho an'ny raharaha manokana, mena ho an'ny raharaha, ary mavo ho an'ny raharaham-pianakaviana.
Ny MacOS Calendars dia mamela anao hanome loko hafa isaky ny kalandrie, ary koa ny fisafidianana ireo kalandrie tianao hojerena amin'ny fotoana rehetra. Saingy ny fandokoana loko dia samy ampy hahafantarana ny zava-mitranga atsy ho atsy.
Para mamorona kalandrie samihafa ary manome loko amin'izy ireo dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Sokafy ny fampiharana Calendar.
Ampidiro ny làlana manaraka avy eo amin'ny bao menio: Kalandrie-rakitra vaovao. Amin'izao fotoana izao dia miseho ny kaonty izay nanendrena anao kalandrie. Tsindrio ny serivisy izay tianao hanomezana kalandrie vaovao.
Hisokatra ny sidebar amin'ny Kalandrie, miaraka amin'ny kalandrie vaovao, hampidiranao ny anarany.
Vita, tsindrio havanana mandritra ny kalandrie vao noforonina.
Hahita bara misy faribolana miloko ianao, kitiho ny loko tianao homena ny kalandrie.
Fotoana izao hanampiana hetsika amin'ity kalandrie vaovao ity, toa ny nataonao mandraka ankehitriny. Aza adino fa ny manendry hetsika iray amin'ny kalandrie manokana, ny fomba tsara indrindra dia ny manindry ny bokotra kalandrie, izay hisehoan'ny kalandrie rehetra. Safidio izao ny kalandrie izay tianao hampidirina ny hetsika ary kitiho indroa ny kalandrie amin'ny andro sy ora voatondro hanaovana ilay hetsika. Avy eo ampio ny fampahalalana sy ny fotoana voatondro.
Rehefa manana hetsika marobe avy amin'ny alimanaka maro ianao, ho hitanao ny vokatra azo. Raha jerena indray mipi-maso ny hetsika rehetra, miaraka amin'ny sarintany misy loko ary manao laharam-pahamehana ny hetsika sasany noho ny hafa, mamela antsika hanova ny fandaharam-potoana raha ilaina izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Arindrao ny kalandrie misy loko mba hahamora ny andavan'andro anao
Mila mivarotra ny Apple Watch ve ianao? Esory aloha ny hidim-pahavitrihana aloha
Ataovy miavaka ny Mac-nao amin'ireto sary mideza nentanin'ny WWDC 2018 ireto